Ogaden News Agency (ONA) – Warbixinta dagaaladii ugu dambeeyay een ka helnay Xarunta dhexe ee JWXO
Warbixinta dagaaladii ugu dambeeyay een ka helnay Xarunta dhexe ee JWXO
Posted by ONA Admin	/ April 11, 2013
Wararka nagasoo gaadhaya wadanka Ogaadeeniya gaar ahaan Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo ka dhacay qaybo kamid ah Dalka Ogaadeeniya ee ay Ethiopia gumaysato,Dagaaladaas oo xukuumada gumaysiga Ethiopia lagaga dilay horin kamid ah Askarteeda ayaa udhacay.
07/04/2013 Deegaanka lagu magacaabo Bubi oo Qabridahar katirsan dagaal ka dhacay ayaa waxaa lagu dilay 2 kamid ah askarta gumaysiga Ethopia. Midkood ayaa ahaa waxa loo yaqaan Shaaliqe .
08/4/2013 Dagaal mir ah oo lagu qaaday fadhiisin ay ka daganaayeen maxaysata Hawaarinta deegaanka Maraacaato oo Qabridahar katirsan ayaa waxaan lagu dilay Tiro kamid ah casawga shacabka oo uu ku iray madixii maleeshiyadaasi.
31/03/2013 Dagaal ka dhacay Daqaska oo Gunagado udhow ayaa waxaa lagaga dilay askarta gumaysiga Ethiopia 3 askari waxaana lagaga dhaawacay 5 kale.
01/4/2013 Caado oo wardheer ka tirsan dagaal ka dhacay waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 2 Askari waxaana lagaga dhaawacay 1 kale.
18/03/2013 Yucub oo Wardheer katirsan waxaa lagu dilay 2 kamid ah Askarta gumaysiga Ethiopia.
29/03/2013 Dagaal ka dhacay Balli-midgaan oo gunacdo udhow waxaa ciidamada mooraalka jabsan ee gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 5 Askari waxaana lagaga dhaawacay 6 kale.
04/03/2013 Deegaanka lagu magacaabo Dacar oo isna Gunagado u dhaw ayaa waxaa lagu dilay 1 askari oo ciidanka gumaysiga Ethiopia, waxaana lagu dhaawacay 2 kale.
01/04/2013 Dagaal ka dhacay Sagag waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 5 Askari waxaana lagaga dhaawacay 3 kale.
02/04/2013 Doofaarey oo Sagag katirdan dagaal xoogan oo ka dhacay halkaasi ayaa waxaa Askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 8 Askari waxaana lagaga dhaawacay 10 kale.
02/04/2013 kamiin ay ka xidheen NH/CWXO Dacawaley oo Wardheer katirsan ayaa waxaa askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 6 Askari waxaana lagaga dhaawacay 4 kale.
Waxaa iyaguna jira dagaalo kale oo ka dhacay kudunbuur, Qaadi cadde, Mardaale, Cumaro, Qaydarka, Dacawaley, Lafaha maroodiga kuwaawsi oo dhammaantoon lagu gaadhsiiyey ciidamada gumaysiga khasaare xoogan.